CNAPS-CCIFM: Nitombo indray ireo mpikambana very asa nahavita fiofanana · déliremadagascar
Socio-eco	 23 février 2021 R Nirina
Ho mora kokoa ny fitadiavana asa. Nahazo mari-pahavitam-piofanana ireo mpikambana ao amin’ny CNAPS very asa 152 nanaraka fiofanana niaraka tamin’ny CCIFM (Chambre de Commerce et de l’Industrie France-Madagascar). Ny 23 febroary 2021 teny amin’ny ivon-toerana haino aman-torolalana (CEO) an’ny CNAPS eny 67 ha no nanolorana izany. “Ny CCIFM no manome ny fiofanana ka tao anatin’izany ny fanomezana torolalana hahatoky tena, nanome ireo karazana lalam-piofanana hampitomboana ny traikefa sy fahalalana. Teo ihany koa ny fanomezana torolalana momba ny fanoratana CV sy lettre de motivation, ny teknika fandresen-dahatra mandritra ny entretien mba ho mora kokoa ny fitadiavana asa avy eo”, hoy ny Talen’ny hetsika sy fanentanana ara-piarahamonina eo anivon’ny CNAPS, Rakotomalala Yvan. Efa andiany faharoa ireto nomena mari-pahavitam-piofanana ireto.
Ao anatin’ny fanampian’ny CNAPS ireo mpikambana very asa vokatry ny Covid-19 ity fiofanana ity. Araka ny fanazavan’Andriamatoa Rakotomalala Yvan fa “aorian’ny taridalana omen’ny CCIFM dia manana safidy indray ireo mpiofana ny amin’ny lalam-piofanana ho arahiny. Ohatra call center, teny vahiny”. “Mbola ho ampian’ny CNAPS indray izy amin’izay mba hanamorana , hanafainganana ny fahitana asa”, hoy izy. Ankoatra izany dia ho “fanokafana ny sain-dry zareo hiasa tena, hamorona asa ho an’ny tena, ohatra asa tanana ity fiofanana ity ary hisy indray ny fiofanana omen’ny CNAPS azy ireo miaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka”, hoy hatrany ny ny Talen’ny hetsika sy fanentanana ara-piarahamonina eo anivon’ny CNAPS. Nambarany fa 376 no efa nahavita fiofanana taorian’ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa teo amin’ny CNAPS sy ny CCFIM, ny 15 desambra 2020. Mbola mandray ireo mpikambana very asa te hanaraka ny fiofanana ny CEO eny 67 Ha.
CNaPS: Hitombo avo roa heny ny mpikambana ao anatin’ny 3 na 4 taona